Atemmu; atreneefo anidaso (1-24)
Yehowa yɛ Ɔtemmufo, Mmarahyɛfo, ne Ɔhene (22)
Obiara renka sɛ: “Meyare” (24)
33 Due! Ɔsɛefo a wɔnsɛee wo;+Wo a wutwa nkontompo a wontwaa wo nkontompo! Sɛ wosɛe ade wie a, wo nso wɔbɛsɛe wo.+ Sɛ wutwa nkontompo wie a, wo nso wobetwa wo nkontompo. 2 O Yehowa, dom yɛn.+ Yɛn ani da wo so. Bɛyɛ yɛn basa*+ anɔpa biara,Bɛyɛ yɛn nkwagye wɔ amanehunu bere mu.+ 3 Wobobom a, aman guan, Wosɔre gyina a, amanaman hwete.+ 4 Sɛnea mmebɛw boaboa wɔn ho ano no, saa ara na wɔbɛboaboa w’asade ano;Nnipa betu agu so te sɛ ntutummɛ. 5 Wɔbɛma Yehowa so,Efisɛ ɔte soro tɔnn. Ɔde atɛntrenee ne trenee bɛhyɛ Sion ma. 6 Ɔno na ɔma w’abrabɔ* si yiye.Nkwagye+ ne nyansa ne nimdeɛ mmoroso, ne Yehowa suro;+Eyi ne n’agyapade. 7 Hwɛ! Wɔn akatakyi su wɔ mmɔnten so;Asomdwoe abɔfo su yayaayaw. 8 Akwantempɔn ada mpan;Obiara nni hɔ a ɔfa akwan no so. Wabu apam no so;*Wapo nkurow no;Ommu onipa dasani biara.+ 9 Asaase no redi awerɛhow,* na abotow. Lebanon ani awu;*+ aporɔw. Saron ayɛ sɛ anwea pradadaa,Na Basan ne Karmel nhaban apo.+ 10 Yehowa se: “Afei mɛsɔre,Afei mɛhyɛ me ho anuonyam;+Afei mɛyɛ me ho kɛse. 11 Munyinsɛn sare a aguan, na mowo wura. Mo ara mo honhom bɛhyew mo te sɛ ogya.+ 12 Nnipa bɛyɛ sɛ akado a wɔahyew, Na wɔde ogya bɛto mu+ te sɛ nsɔe a wɔatwa agu fam. 13 Mo a mowɔ akyirikyiri, muntie nea mɛyɛ! Mo a mobɛn, munnye m’ahoɔden ntom! 14 Abɔnefo a wɔwɔ Sion abɔ hu;+Awaefo ho popo biribiri: ‘Yɛn mu hena na obetumi atena baabi a ogyaframa kɛse wɔ?+ Yɛn mu hena na obetumi ne ogya a ɛredɛw daa atena?’ 15 Nea ɔnantew trenee kwan so daa,+Na ɔka nea ɛteɛ,+Nea okyi nsisi ne apoobɔ sika,Nea ne nsa kyi adanmude* na onso mu,+Nea osisiw n’aso na ante mogyahwiegu ho asɛm,Na ɔkata n’ani na anhu bɔne. 16 Ɔno na ɔbɛtena mmepɔw so wɔ sorosoro;Ne guankɔbea a ɛyɛ den* bɛyɛ ɔbotan aban a ɛhɔ kɔ yɛ den.Wɔde n’aduan bɛma no,Na ne nsu rensa da.”+ 17 W’ani behu ɔhene bi wɔ n’anuonyam mu;Ebehu asaase bi wɔ akyirikyiri. 18 Wobɛkae ade a ɛyɛ hu no wɔ wo koma mu:* “Ɔkyerɛwfo no wɔ he? Nea ɔkari tow no wɔ he?+ Nea ɔkan abantenten no wɔ he?” 19 Worenhu ahantanfo bio,Ɔman a wɔn kasa mu dɔ a wonte,Ɔman a wɔka ahɔho kasa a wonte ase.+ 20 Hwɛ Sion, yɛn afahyɛ kurow no!+ W’ani behu Yerusalem, tenabea a ɛhɔ yɛ komm,Ntamadan a obiara rentu no.+ Nnua a wɔde abobom atim fam no, wɔrentutu da,Na ne hama biara mu rentew. 21 Na Yehowa, Otumfo no,Bɛbɔ yɛn ho ban wɔ hɔ te sɛ baabi a nsubɔnten ne nsuka akɛse wɔ.Hyɛn a wɔde kɔ ɔko biara remfa mu,Na ahyɛn akɛse biara rentwam wɔ hɔ. 22 Efisɛ Yehowa ne yɛn Temmufo,+Yehowa ne yɛn Mmarahyɛfo,+Yehowa ne yɛn Hene;+Ɔno na obegye yɛn nkwa.+ 23 Wo nhama mu begow;Ɛrentumi nsuso hyɛn dua no mu denneennen; na ɛrentumi ntrɛw hyɛn ntama mu. Saa bere no, wobenya atamfo nneɛma pii akyɛ afa;Apakye mpo bɛfom nneɛma bebree.+ 24 Na ɔmanfo no mu biara renka sɛ: “Meyare.”+ Wɔde nnipa a wɔte asaase no so bɔne bɛkyɛ wɔn.+
^ Kyerɛ sɛ, ɔtamfo no abu apam no so.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Asaase no mu nsu atwe.”
^ Anaa “Wɔabrɛ Lebanon ase.”
^ Anaa “abantenten.”
^ Anaa “Wubedwinnwen ade a ɛyɛ hu no ho wɔ wo koma mu.”